Medical Writings ဆေးပညာစာများ: This Blog becomes alive again now!
This Blog becomes alive again now!
ဒီဘလော့ခ်ကို ယူအက်စ်ကိုရွေ့ပြောင်းနေရကတည်းက အီးမေးလ်လိပ်စာကိုဝင်မရတော့လို့ သေသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ တင်ပြီးသားတွေလည်း ပြင်မရ၊ အသစ်လည်းထပ်တင်လို့မရဖြစ်သွားရလို့ ဘလော့ခ်အသစ်တခု ထပ်ရေးရပြန်တယ်။ အဲလိုဖြစ်တာတွေ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းလှပါ။
အခုတော့ အရင်အီးမေးလ်ရော ဒီဘလော့ခ်ပါ အသက်ပြန်ဝင်လာကြပါပြီ။ ဘလော့ခ်အဟောင်းထဲက ပြင်စရာတွေလိုက်ပြင်ဘို့ အလုပ်လည်းပိုလာပြန်တယ်။ မောအုန်းမယ်။ အချိန်ကနည်းလွန်းလှတယ်။ ကူမယ့်သူလည်းမရှိ။ မတတ်နိုင်ပါ။ နိုင်သလောက်တော့လုပ်မယ်။